GalaxyChallenge – Gaming Noodle
Claw Esports PUBG Mobile Roster Change Just the day after the completion of Galaxy Challenge PUBG Mobile tournament, claw esports changed their roster. They announced on their Facebook page that their players “Pablo” and “AKgTaMyo” are no longer with the team. This could be the consequences of their poor performance at the Main Event …
Claw Esports PUBG Mobile Roster Change Read More »
ပြောင်းလဲမှုစတင်လာတဲ့ Claw Esports PUBG Mobile အသင်း
[Zawgyi] ပြောင်းလဲမှုစတင်လာတဲ့ Claw Esports PUBG Mobile အသင်း Samsung Galaxy Challenge 2019 ပြိုင်ပွဲပြီး နောက်တစ်ရက်မှာတော့ ပြည်တွင် နာမည်ကြီး PUBG Mobile အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Claw Esports ဟာ လူစာရင်း ပြောင်းလဲမှုတွေကို ချက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Claw Esports PUBG Mobile က Player တွေဖြစ်တဲ့ Pablo နဲ့ AKgTaMyo တို့ဟာ အသင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ Galaxy Challenge က ပုံမှန်အောက် ရောက်ခဲ့တဲ့ Performace ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်အနေနဲ့လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ပြိုင်ပွဲတွင်းမှာလည်း နည်းပညာဆိုင်ရာ …
ပြောင်းလဲမှုစတင်လာတဲ့ Claw Esports PUBG Mobile အသင်း Read More »
Media Partnership Announcement for Samsung Galaxy Challenge 2019
Media Partnership Announcement for Samsung Galaxy Challenge 2019 [Zawgyi] ကျွန်တော်တို့ Gaming Noodle ဟာ Samsung Galaxy Challenge 2019 PUBG Mobile Tournament အတွက် Media Partner အဖြစ် တရားဝင်လက်တွဲခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ Galaxy Challenge ဆိုတာကတော့ Claw Esports က ဦးစီးကျင်းပပြီး Samsung Myanmar က စပွန်ဆာပေးအပ်ထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြိုင်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဆုကြေးအများဆုံး PUBG Mobile Tournament ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် ဆုကြေး သိန်း (၁၀၀) ကျပ်အထိ ပေးအပ်သွားမှာပါ။ အသင်းပေါင်း (၅၀၀) အထိ ပါဝင်ကြမယ့် ဒီပြိုင်ပွဲမှာ …
Media Partnership Announcement for Samsung Galaxy Challenge 2019 Read More »